Zhytomyr State University - Study muUkraine
guta : Zhytomyr
Musakanganwa kuti kurukura Zhytomyr State University
Bvunzai Zhytomyr State University
Zhytomyr State University ane refu uye rinobwinya tsika kuti tinochengetedza uye muwande nhasi. It kwapfuura gwara rayo zvakaoma uye minzwa, gwara kuchiratidzwa zvesayenzi uye dzidzo laurels, vakakurumbira unhu uyewo groundless kupomera uye enyika udzvanyiriri. zvisinei, pasinei dzose nezvipingamupinyi, mukuru Zhytomyr mudunhu Institute dzidzo yepamusorosoro vakaramba kushanda uye kukudziridza-siyana zvavakatemerwa nezviremera uye vakakodzera pfungwa sayenzi enlightment kwagara unonyanyoshandiswa mariri.
Zvinogona simba dzokudzidzisa mudonzvo, upgraded zvinhu zvekushandisa zvitengeswa, ano itsva hwokugadzira pakudzidza zvakawedzera ayo kanokura zvikuru nomukurumbira establishments dzidzo muUkraine. Its anopfuura 80-zviuru hondo kudzidza mabasa pamakona ose Ukraine uyewo kumwe. Pakati pavo pane nyanzvi akakurumbira - mathematicians, yefizikisi, zvipenyu, Vanodzidza, nyanzvi dzemitauro, dzakaitika, vanyori, mamaneja dzidzo, vamiriri, enyika uye mamiriro nenhamba. Nokuda kwavo mabasa, tsvakurudza uye kudzidzisa nokubudirira Zhytomyr State University chinhu chavanokoshesa zvikuru kwete chete muUkraine asiwo kure nemiganhu yayo.
International Rezvemhosva Rating pamusoro kukurumbira uye unhu akabvuma kuyunivhesiti sezvo “Inomirira dzenhoroondo dzidzo”. ZSU yave munorumbidzwa sirivha menduru “Kubwinya yokuvimbika kuna Motherland”, ndicho anaro sirivha Stella uye Diploma pamusoro yepamusoro. Nebudiriro kuyunivhesiti vari with honorary mibayiro yevanhu nomukurumbira ratings pamusoro “Sofia Kyivska”, “Ungano mabhizimisi madenderedzwa rweUkraine”, International Fund for yepamusoro zvebhizimisi (Geneva), Club of Rectors muEurope uye Nominating reDare European Business Assembly (Oxford).
Vakapedza kudzidza kwedu vane inokosha ruzivo zvikuru, zviri kuchinja uye nokukurumidza achichinja kune kuchinja, inokwanisa kushanda kupfuura imwe Occupational nzvimbo, kuramba akadzikama pasi chokwadi uye mhedziso kuvhiringidzika -employers kutamburira nokuda nenyanzvi mukuru-kirasi kwakadaro.
vadzidzi vedu kuwana zvose inosangana zvinodiwa ano nyanzvi muenzaniso: nyanzvi ruzivo zvakadzama, kombiyuta vachishandisa unyanzvi, noumhizha mumitauro mumwe kana miviri vatorwa. kana vakada, vanogona kuwana zvakaenda akawanda (mudzidzisi, munyori, kombiyuta opareta, mugeri, mutyairi, etc.). Kubva pamazuva okutanga chaizvo panguva vadzidzi vepayunivhesiti vanobatanidzwa pakutsvakurudza basa, vanoramba dzidzo panguva tenzi uye dhigirii makosi kugamuchira miteva uye DSc / DLett madhigirii sezvazviri. kuferefeta Scientific vakapedza kudzidza yedu yairemekedzwa mu nharaunda yavo. Ndivo vakundi pamusoro nomukurumbira Makwikwi uye mibayiro Mutungamiriri weNyika rweUkraine uye Cabinet wenyika Vashumiri muUkraine.
Okupedzisira emakore 17 zvikoro nesayenzi, 20 kwesayenzi nzvimbo, 30 kwesainzi uye tsvakurudza methodological mumarabhoritari yakabuda. Masayendisiti ari kuyunivhesiti panguva chete 2009-2013 rakabudiswa kupfuura 15 zviuru kwesayenzi uye methodological nemabasa, akava makumi maviri kwepamutemo nokuda kuferefeta kwesayenzi mune zvemutauro, wepfungwa, Physics, biology uye kemesitiri, zvose hunopupurira kwakatanga kutsvakurudza basa zvose 41 madhipatimendi. The University rinobudisa 6 endangariro nesayenzi kuti vane zvinzvimbo pakati Ukraine mabhuku.
Nokuda kuvhara kwesayenzi uye dzidzo kubatana yunivhesiti nzvimbo muna U.S., Jerimani, Great Britain, Itari, Furanzi, Ositiriya, Mekisiko, Porendi, Sirovhakiya, Hangari, Russia nedzimwe nyika fakaroti uye vadzidzi vanogona kuitawo makwikwi siyana, zvidzidzo joini zvechikoro researches, tsika, kudzidza uye mberi nedzidzo yavo kunze.
Zhytomyr State University kwete chete anopa chinokosha ruzivo, anovandudza rudo zvesayenzi uye dzidzo mabasa, asiwo kunoratidza nebudiriro pamwero yemunharaunda hurumende yose. Mumwe zvinhu zvayo democratization uye humanization ukama pakati vadzidzisi uye vadzidzi. Yunivhesiti ine mibayiro maitiro (“mudzidzi yakaisvonaka ZSU”, “Kubwinya ZSU”, “Honoured mushandi ZSU”, “Honoured Dhokotera ZSU”, “Uchisaruta Purofesa ZSU”), izvo zvinopa kusimudzira basa chero anokurudzira vadzidzi nevadzidzisi kuti vabatsirwe University, nharaunda uye mamiriro yose.
Rinogadzwa panguva Zhytomyr State University Mudzidzi Kuwadzana anorenda chete Kutarisirwa anoronga upenyu nenzira hakuna mumwe kupfuura gumi kuzviuru mhuri yunivhesiti inomira parutivi zvetsika nemagariro upenyu seboka. pano, pakati hurumende mudzidzi, tsika uye dzidzo nzvimbo yakanakisisa zvinoitwa hunhu, utariri unyanzvi, tsika uye aesthetic tsika akaumba. vadzidzi vedu vapepeti uye venhau mapepanhau uye mudzidzi redhiyo uye terevhizheni, nhengo unyanzvi makirabhu, mudzidzi unyanzvi mabasa, youth evanhu basa, pamutemo Makiriniki, basa centre, KVN zvikwata, makirabhu, vakawanda mitambo makirabhu nezvimwe masangano akawanda zvinozivikanwa kwete Zhytomyr nharaunda, asiwo kure nemiganhu yayo.
Today Zhytomyr State University chinhu chisinganzwisisiki multy-STRUCTURAL ezvinhu kuti unosanganisira nhamba dzadzidza, zvesayenzi uye kugadzirwa kwezvinhu zvivako, Inter yunivhesiti tsvakurudzo nzvimbo uye Kudya, mumaraibhurari akawanda, zvomunharaunda kombiyuta samambure, Observatory, agrobiostation, imba yekudyira, Datenroku, buffets, kutsikisa centre, 5 dormitories uye mitambo ano kunzwisisa.
Kure kwete yunivhesiti ose ane zvinotevera zvinogona. Asi zvikuru urongwa hwedu chokuita racho kune European nzvimbo edzidzo, kunyanya, kunokonzerwa yunivhesiti utariri hurongwa informatization, pokugadzwa vakarongeka E-raibhurari, yakafara Indaneti, kuwana yemarudzi kwegadziriro mumaraibhurari, dzidzo kure, zvesainzi sumbu, uye zvakawanda.
Hwedu hwokudzidzisa mudonzvo ine nyanzvi vakabata DSc / DLett, miteva madhigirii, vanoshanda mapurofesa, sanyina mapurofesa, lecturers uye varayiridzi. Mukati-gore 95 chokupika Zhytomyr State University yokufeva mudzidzisi tsika rakaumbwa. Ndicho chikonzero taiva, uye nguva dzose uchava Korolenkos, makumi, Bondarchuks, Kasymenkos ...
Zhytomyr Ivan Franko State University iri nechivimbo kutamira ramangwana. By vagari kuedza fakaroti, vadzidzi netsvimbo kuramba kusika University munhoroondo. Kudzidzisa Vashandi ndiyo tariro nezveramangwana nokuti pane zvikonzero zvakanaka zvokuva nechivimbo chokuti makore anouya uye emakore ichava nguva okukunda itsva rokusika uye kubudirira. Nhasi yunivhesiti yedu nomukurumbira, mangwana ichava chimwe chezvinhu zvikuru nomukurumbira, uye kodzero yokushanda uye kudzidza kuchava kukuru.
Rubvumo kwacho Zhytomyr State University
Educational uye Research Institute of Foreign Philology
Educational uye Research Institute of Pedagogics
Educational uye Research Institute of Philology uye nhau
Rorusununguko Mathematics uye Physics
Rorusununguko Physical Education uye Sport
Rorusununguko Social Psychology
Center pamusoro Dzebasa Dzevakawana Dhigirii Education uye Pre-University Tutorial
Department of bhotani, Biological Resources uye Conservation of Biological Diversity
Department of Ecology, Nature Management uye Human Biology
Department of Zoologie, Biological Monitoring uye Nature Conservation
Department of Cross-Cultural Communication ndikarangarira zvemutauro
Department of Chirungu Language
Department of Chirungu Philology uye Translation
Department of Foreign Languages ​​uye Modern Teaching Techniques
Department of eGermany Philology uye Foreign Literature
Department of History rweUkraine
Department of Special Historical Anoranga uye Mutemo Studies
Department of Zvakarurama Mathematics uye Computer Science
Department of nemasvomhu uye Geometry
Department of akarongeka Analysis
Department of Labour Protection uye Civil Safety
Department of Aesthetics, Ethics uye Fine Art
Department of Chirungu Language uye Primary ELT nzira
Department of kwomutauro Techniques uye Rokudzidzisa Professional Language
Department of Music uye magadzirirwo awo pamwe Nzira Teaching
Department of Pedagogy, Psychology uye Educational Institutions Management
Department of Preschool Education uye Pedagogical zvakagadzirwa
Department of Didactic zvemutauro uye Mamwe mabhuku Studies
Department of Publishing, Editing, ivo kunyatsogona nhau uye Philology
Department of necheSalvic uye eGermany Languages
Department of dzidziso uye History World Literature
Department of Ukrainian Literature uye kuenzaniswa Studies
Department of Physical Education uye Recreation
Department of Medical uye Biological zvigadziko Panyama Education uye Sport
Department of dzidziso uye Nzira Panyama Education
Department of Olympic uye Professional Sports
Department of Social Pedagogy uye Pedagogical Unyanzvi
Kutanga XX remakore pakataurwa nokukura National hana Ukrainians dzavo kuedza dzidzo, tsika uye kuzvidzora ruzivo. Foundation of Central Council muna Kyiv, Kurume, 1917 kwakatungamirira nedanho democratization munzanga upenyu, pakubata rokukurumidzira magariro matambudziko.
Vakuru veko vakatanga kugadzirisa yokutanga zvinetso. Pakutanga 1918 Volyn 'hurumende iri pamwe dare rechikoro yakanyorerwa reBazi Redzidzo rweUkraine kuti akawana vadzidzisi' kudzidziswa akatanga Zhytomyr. Kudanidzira haana kunzwa nokuda kusagadzikana ezvinhu enyika.
Panguva hetman hurumende iri Zhytomyr zvikazikamwa kuti vadzidzisi 'kudzidziswa akatanga rakazotamisirwa kubva Kishinev mumwe Ukrainian maguta. mu 1918 hurumende yeko yakanyorerwa reBazi Redzidzo achiti uchatamisa sangano kuna Zhytomyr. Hurumende omunharaunda akavimbisa kusangana zvose zvinodiwa Ushumiri pamusoro mari, nyika chivakwa chitsva, furati kurendesa. EDZA IZVI akakundikanawo.
A chivakwa nokuti akatanga akanga nyore kuwanikwa. Rakanga chivakwa kuvakwa muna 1862 nokuti Zhytomyr murume jimunasiyamu, iyo yakavharwa muna 1918. The kunzwisisa raiva kudzidza chivakwa, maviri amabwe mapapiro, chishongedzo zvivako uye bindu guru. Paiva diki pamberi bindu pamwe nemamwe miti uye tsime iri pakati. The akaoma vakapona kuti mazuva edu, asi rakanga reconstructed kupinda paburiro matatu kwomurabhoritari uye dzidzo kunzwisisa № 1. Mumazuva edu kuyunivhesiti Kutarisirwa hofisi, Zvivako kuzvipatara uye rorusununguko Physics uye Mathematics vanowanwa ikoko. Munguva iyoyo kunzwisisa akagarwa 9 chidzidzo makamuri 23 makamuri hunoshanda uye rabhoritari makirasi vane vakawanda munzvimbo 920 mativi makiromita.
The pedagogical akatanga - wokutanga sangano iri Polesia nharaunda wakavhurwa chaizvo pakuti chivakwa pamusoro 16 yaOctober 1919. It nhaka jimunasiyamu pechingoro, raibhurari yacho, miziyamu, Meteorological chiteshi. Yainzi Volynskyi, Papera Zhytomyr pedagogical sangano.
Petro Nikadirovich Abramovich, chinoshingaira nomukurumbira, yakagozha mudzidzisi, anozivikanwa nyanzvi mune ngano, ethnography uye mutauro Ukrainian, akakonzera kurongwa pedagogical Council - soro administrative mutumbi Institute. Iye rinotungamirirwa dare uye akasarudzwa musoro rokutanga sangano. akanga The pedagogical chakagadzirwa kubva vasayendisiti, nhengo Researchers 'Society of Volyn'. Pakati pavo paiva O.O. Fotinskyi - wenhoroondo, ane munyori nemabasa ari Ukrainian munhoroondo, Ye.O. Nenadkevich - anozivikanwa nyanzvi mumitauro uye mabhuku, Akaitawo researches chakasiyana Dzhafarova mabasa; Ehe. Brazhnikov, I.Yu. Smirnov, M.V. Yanevich - akaoma masayendisiti muminda pedagogics, unyanzvi uye mitauro. M. P. Kudritskyi aiva mumwe rokutanga lecturers paInstitute. Iye inozivikanwa mutsvakurudzi of Polesia muzvarirwo, yefizikisi uye meteorologist. Aiita Korostishiv vadzidzisi 'chebhaibheri kusvikira 1901 gore (ikoko akanyora bhuku "Korostishiv Climate", kuti vakatora nzvimbo yechitatu panguva dzakawanda kwemasimba kuParis iri 1900). 14 lecturers vakashanda panguva iyoyo. Mumazuva mashomanana 9 zvakawanda nezvokurara vaivapowo basa. Vaiva S.V. Bilskyi - mutsvakurudzi of Polisia chicherwa deposits, geologist; M. O. Puchkovskyi - nyanzvi of pedagogical wepfungwa, Yu.Yu. Bruher - mumwe wemhuka, O.H. Pozdnjakov - a kemisiti uye bhayorojisiti. Gare gare lecturers yacho-gore maviri pedagogical makosi vakabatana: wenhoroondo M.P. Ljatoshinskyi, baba munyori Boris Ljatoshinskyi, mathematicians S.S. Oliynik, A.Ye Oliynichenko, nyanzvi mune mabhuku - O.O. Richkov.
The pedagogical institute aiva dzakaitika uye mutauro, Physics uye masvomhu, nenzvimbo zvichitaurwawo yakatangira chikoro, kudzidza kwacho 4 makore. Institute kanzuru chagamuchirwa wechikoro electivity pakati lecturers zvinhu; vaiona uye anotenderwa kudzidza uye yehurongwa uye zvirongwa, vamhan'ari 'zvinodiwa.
Pasinei nematambudziko yomunharaunda dhipatimendi redzidzo uye vagari Zhytomyr akabatsira uye vakatsigira akavamba urongwa. Pakanga zvemari zvokudya, mabhuku kuraibhurari, mano, zviridzwa vakaungana kubva zvinyorwa zvakasiyana-siyana.
Nguva pfupi mudzidzisi M.P. Kudritskyi, paakavapa nokuti kubudirira kwake meteorology maererano Russian nenzvimbo munzanga 1895, vakarongeka Physics kirasi uye kufamba Meteorological zvaanorumbidza. O, O. Fotinskyi - musoro Language uye History fakaroti wokutanga, akagadza kabhineti rweUkraine uye Volyn 'History.
Zvishoma nezvishoma makabhati uye mumarabhoritari nokuda Mathematics, jogirafi, zvidzidzo zvemhuka, akiyoroji, Ethnography, mutauro, uye Literature makirasi akashongedzerwa.
Pa 16 yaOctober 1919 kudzidza akatanga panguva mano dzakadaro: Language uye History weVadzidzisi Vedare, Physics uye Mathematics, Rorusununguko Nature uye Geography.
53 vadzidzi-gore 2 pedagogical makosi, vadzidzisi vakawanda kubva pedo-pedo nemisha, 5 jimunasiyamu kudzidza uye vadzidzi nevamwe mumayunivhesiti, Kunyanya kubva Kyiv University vaiva vadzidzi Zhytomyr akatanga rokutanga. Panguva iyoyo zvakanga zvava kushandisa pasina gwaro zvesekondari. Paiva kubvunzurudza kuwana kubva padanho ruzivo. Chikumbiro izwi kwakatora inoverengeka, pakutanga 1920 350 vanhu vakava vadzidzi, asi chete 180 Dzaitotaura kudzidza.
Institute vakavhura sezvo pedagogical, asi pamusoro 10 yaJune 1920 chaiendiswa mukati vadzidzisi 'sangano kubudikidza hurongwa commissar pakati Ukrainians People Republic hurumende. Gare gare mumayunivhesiti zvose, Vadzidzisi 'Kudya, zvikurukuru Zhytomyr akatanga vakanga kurongwazve kupinda dzidzo marudzi 'Kudya.
mu 1920 Bazi Education of Zimbabwe mvumo murayiro Volyn 'pedagogical sangano, iyo Yakazopiwa zita rokuti dzidzo Volyn 'marudzi' akatanga chete gore. Chinangwa chacho chaiva kugadzirira nezvokurara nokuda zvese, kunyanya kuenda kukireshi, chikoro uye kunze chikoro dzidzo. Maererano mutemo wacho kudzidza kwacho kwakatora makore mana, asi pakanga specialization mukati dzinokosha uye chinokosha madhipatimendi.
The-Gore rokutanga vadzidzi kudzidza inokosha, Saka - inokosha dhipatimendi. The chikuru dhipatimendi akanga nechinangwa kugadzirira vashandi uye murimi mudiki akanga Makwanza zivo yavo kana dzidzo kukwana yechipiri. Kudzidza ari dzinokosha dhipatimendi yaiva mukuru; yakapa mukana kuwana unyanzvi zvevadzidzi uye matarenda nokuda zvikuru specialization.
Paiva kugara kuchinja musoro senyaya Institute. Pamugumo 1920 Council akabvisa P.N. Abramovich kubva musoro cheya maererano kwake. yemasvomhu M.A. Mihajlevich akagadzwa kuva musoro chitsva 5fung December chete gore. Akashanda kusvikira 15 Kurume 1922. zita musoro panguva 1922-1923 harizivikanwi. M.V. Yanevich - yakakurumbira mudzidzisi uye muzivi - ndokunanga dzidzo Volyn 'marudzi' akatanga 1924-1925 makore. mu 1925-1928 Institute akanga inotungamirirwa Y.K. poppet, kudzidza Mutemo weVadzidzisi Vedare, Lviv University. A kudzidza Philology zvakafanana University V.P. Hotsa kuenda ari akatanga February 1928-1933. Aiva yakagozha munhu ane ruzivo hwakarongwa rurimi rwaamai uye nhoroondo uye akashanda kwemakore akawanda mune dzidzo.
makore mashanu okutanga zvakatsaurirwa kutsvaka idzva sangano nezvimiro uye nzira dzidzo. Rakanga anokonzerwa ndechokuti inokosha rokudzidzisa pamwero chaiva chikoro-gore nomwe. Ndicho chikonzero nei hurumende wokuUkraine vakapfuura murau pamusoro Social Education weVadzidzisi Vedare naye makore matatu kudzidza izwi kugadzirira vadzidzisi zvikoro-gore nomwe uye zvikoro chevana. Paiva kuchinja zviri redzidzo uye chimiro: nokukurumidza zvinoderedza hurukuro uye vachiwedzera rabhoritari mabasa, misangano, uye excursions. pfungwa huru rwakabhadharwa kuna makirasi anoshanda. Rimwe zuva pavhiki chakatsaurirwa kuna makirasi anoshanda. zvakagadzirwa izvi zvakasimbisa rinobatanidza sangano-chikoro. Pane rimwe divi, zvinoderedza of yokungotaura kosi, implementation pamusoro murabhoritari nokutsvakurudza nzira zvakakuvadza rwevanhu uye yokungotaura nehwaro kudzidza. Mumwe kubudirira kwakanga kuti nyaya dzakadai Ukrainian History, Language uye Literature vaiva kwairayirwa panguva nokukuyeuchidzai zvose.
Zhytomyr October chimurenga manheru fakaroti vashandi rakaumbwa 1922; Chinangwa chacho chaiva kugadzirira vanhu kuti kumayunivhesiti. Chakanga mano maviri: mukugadzirira nokuti akatanga uye maindasitiri dzidzo evanhu - nokuti kwemakore matatu zveindasitiri hwokugadzira kukoreji. 341 kwevadzidzi kudzidza fakaroti pamusoro 1 yaJanuary 1924. Mumakore mana simba rorusununguko rakanga pasi wenharaunda yaitongwa akatanga kwevanhu rokudzidzisa.
Party uye Koshanda nzvimbo dzakarongwa panguva akatanga 1923-1924. muviri Executive Students ' (kurongwazve kupinda nevadzidzi 'mubatanidzwa) akagovera dzidzo, dhomitari nzvimbo, Vakaronga rokuzvipira vakachena-up, zhizha zororo basa, nechokuita chirango yokufaranuka uye.
Vadzidzi vokutanga kudzidza akatanga 1922, majaya nezvokurara vakatumwa kupinda zvikoro. Paiva O.F. Lahovski, O.Ya. Teodorovich, K.D. Prishchenko vakava vadzidzisi nomukurumbira, uye M.V. Homichevskyi, kuzvikudza Zhytomyr University.
Mugore 1926 aiva haizombofi pamusoro sangano. The Ukrainians uye nyika vanhu vaipemberera 70 I.Ya. Franko mhemberero. Kuti kumukudza zita rake akapiwa akatanga Zhytomyr vanhu rokudzidzisa. mu 1926 I.Ya. Franko bhezari rakavambwa, kukapiwa yakanakisisa vadzidzi. S. Alber, mudzidzi wemasvomhu weVadzidzisi Vedare, ndiye wokutanga uyo akaita bhezari.
Panguva iyoyo akatanga yakava muzinda esayenzi Volyn '. Chakanga chakadzama dzidzo uye zvinhu chawo, huru botanical mubindu, munhu Meteorological chiteshi, Labs, mumwe miziyamu uye raibhurari pamwe 120 mabhuku zviuru. From 1926 mairi vachinzi Misangano kwesayenzi uye dzokusiyirana pamusoro pakati-ne Republican mumatunhu.
In rejubheri gore lecturers 'mudonzvo vakagadzirira uye yakabudiswa vhoriyamu yokutanga "Volyn' Ivan Franko akatanga vanhu rokudzidzisa inoti", zvakanga pfupiso Franko rokusika basa. Vhoriyamu ine P.N. Abramovich nyaya sangano nheyo nhoroondo, "Franko uye dambudziko vaverengi 'kwenzanga" by Ye.O. Nenadkevich, "Flora riri mwaranzi inokuvadza akaturikidzana" by V.H. Skorohod, kwakavakirwa zvachose musi Zhytomyr nharaunda zvokuvakisa, "Kubva reflexology kuti psychophysiology" by M.O. Puchkivskyi nezvimwewo. Institute rakabudiswa mavhoriyamu matatu manotsi kwesayenzi mukati wokutanga gumi.
Yakanakisisa Vadzidzi aiitawo basa zvesayenzi. Mushumo ekunze "Weather muEurope, Ukraine uye Zhytomyr nharaunda "akanga aigara wakabudiswa. Zvaikosha zvokurima nharaunda. The Nhengo mabhuku muvanhu akadzidza I.Franko, T. Dzhafarova, Lesia Ukrainka anoshanda, dzakaongorora rokusika muitiro uye zvinetso Ukrainian uye nyika mabhuku.
mu 1926 paiva rudzi rechishanu kudzidza. Nhamba yevadzidzi akanga achikura, asi kwakanga kushayiwa vadzidzisi.
In December 1927 Verengai-inoongorora vadzidzisi yakaitwa muUkraine. Yakaratidza kuti chete 22.9 % vadzidzisi vaiva dzidzo yepamusorosoro kana yechipiri inokosha. Vamwe vakapedza yechipiri chete kana kunyange chikoro chepuraimari. Dambudziko vadzidzisi 'zvinodiwa raiva rokukurumidzira. Nhamba yakawedzera vadzidzi uye lessening wetsvakurudzo izwi akanga nechinangwa kurigadzirisa.
Zvinhu chawo uye uwandu Vadzidzi Institute Zhytomyr vanhu rokudzidzisa vakawedzera nerimwe gore. mu 1920 pakanga paine 180 vadzidzi, 1924 - 258, 1927 - 519.
Zhytomyr pedagogical kukoreji akanga akabatana Institute somunhu fakaroti. It vakagadzirira vadzidzisi chikoro chepuraimari.
mu 1927 pakanga akasuma kunodzidziswa zvechiuto, musasa pagore, uye vachidzidzisa pa hondo chikwata.
Institute vakapemberera mhembero raro 1929. nhamba vakapedza 'zvakanakisisa madambu - 300 nezvokurara pamwe dzidzo yepamusorosoro. Vakawanda vavo vakava nyanzvi hunoshamisa, vanyori, uye vadzidzisi.
Institute yakanga kurongwazve kupinda Institute of mumagariro dzidzo; ikava rakaoma kwemiviri dzidzo: pedagogical sangano, vaviri pedagogical mumakoreji, pedagogical chikoro uye ekudzidzisa. Chinokosha zvichitaurwawo vaiva Social dzidzo fakaroti uye Complex fakaroti kuti vakagadzirira vadzidzisi vane dzidzo yepamusoro kuti chikoro chepuraimari. Kwaiva ekudzidzisa nokuda Complex fakaroti. Social dzidzo fakaroti akadzidzisa vadzidzisi yokusekondari. Nhamba yevadzidzi yakawedzera: 850 vanhu anodzidzwa 1929/30.
Kuchinja yedzidzo kwacho sangano uye kutarisira zvakadzama dzakanga dzatangwa. Madhipatimendi yakatsiva kutenderera makomisheni. madhipatimendi wekutanga vaiva wemasvomhu uye michina nyaya, mutauro uye mabhuku, zvemagariro zveupfumi uye zvakasikwa nokuranga. Nokukurumidza mamwe madhipatimendi vakanga vanowanika.
Institute mudonzvo vakava ruzivo. Kupfuura akaoma lecturers uye nyanzvi Institute akazvipiwa madhigirii muzvinadzidzo wacho. Yokutanga uyo akasarudzwa chinzvimbo vakanga philologist P.N. Abramovich, wepfungwa M.O. Puchkivskyi, yemasvomhu M.A. Mihalevich, pedagogue I.I. afanaseva, wemhuka Yu.Yu. Bruher, kemisiti L.K. Kulbitskyi. 10 lecturers vakava mukuru lecturers. Pakati pavo paiva geographer P.H. Postojev, wenhau L.I. ruwa, yemitauro Ye.S. Brazhnikov. chikamu kwavo muupenyu esayenzi sangano rakanga rakakurumbira. Asi ramangwana akagadzira vatsungirire uye zvipingamupinyi kwavari.
Prewar makore (1930-1941)
Industrial budiriro muna 1930-es uye munzanga marongerwo kuchinja kunodiwa yepamusoro pamwero dzidzo vashandi, uye yaikurudzira implementation pamusoro kwairayirwa, pachena zvepuraimari uye dzidzo-gore nomwe. The kuwedzera samambure chikoro achida mamwe nedumbu uye kuvandudzika vadzidzisi 'dzidzo mudonzvo. Kuwanda vadzidzi vachiwanda.
233 vadzidzi vakanga vagamuchira kuti Zhytomyr munzanga dzidzo akatanga 1930/31. 159 vadzidzi vakanyoreswa kuti vashandi nezuva 'kukoreji, uye 90 - Kusvikira manheru kosi. The madhipatimendi itsva vakasikwa 1931: zvemaumbirwo dhipatimendi, kemesitiri, mafungiro, Political Economics, kurima, Language uye Literature Department. The Institute Vashandi (43 nhengo) kwakavandudzika. 18 Vakapedza kudzidza vakasiyiwa kushanda panguva akatanga 1931. Vaiva Y.F. Matkivskyi, Papera wapurofesa ari Chemistry dhipatimendi; I.S. Ljah, Papera mukuru wedhipatimendi Enyika Economics, S.P. Alber, purofesa Mathematics. From 1933 iye rinotungamirirwa weDhipatimendi Physics uye Economics.
1930-vha dzakanga dzizere nezvipingamupinyi nokuti Zhytomyr Institute mudonzvo. 379 Vadzidzi vakasiya akatanga 1932, 286 - vari 1933. Chikonzero chaiva nzara. Nokuda kwachiri nhamba vadzidzi rakanga shoma. Semagumo, nhamba nezvokurara akanga yakaderera. 183 vadzidzi kudzidza ari akatanga 1931, 106 - vari 1932, uye 96 - vari 1933.
kutambudzwa, purges uye repressions vakanga vachibatirira pamusoro vadzidzisi uye vadzidzi. 50 vadzidzi vakatumirwa pasi kubva Institute kuti asataura kirasi yavo mumagariro uye atumidzwa pakaunda-chimurenga mabasa. mu 1932/33 33 vadzidzi, sevanhu zvinhu muvengi, vakatumirwa pasi, vadzidzisi Zhukov, ribhoni, Posuvalov vaipomerwa nationalist mabasa uye kudzingwa basa. Lecturers S.V. garaji, M.A. Mihailevich, M.A. Buinitskyi, L.K. Kulbitskyi vakanyoreswa kuti boka muvengi mazita uyewo. Musoro repressions vakatora nzvimbo paInstitute mumakore akatevera. The zvakakura kukuvara kwacho mudzidzisi uye mapurofesa 'mudonzvo. Musoro Institute K.M. Tabakmaher Akasungwa muna 1936, 18 lecturers - ari 1937. 15 akamuka norufu: vakuru Institute K.Ye. poppet, V.P. rira, O.S. Panteljeev, musoro Pedagogy dhipatimendi L.M. Hinkivskyi, muzvinadzidzo P.H. Postojev, wapurofesa S.K. Kovalevskyi, vadzidzisi Ukrainian mutauro H.M. Holovatyi, V.K. Omelchenko, I.D. Suhan, Chemistry mudzidzisi A.O. mumhanzi, Ukrainian mabhuku mudzidzisi A.P. Suprunovich, mudzidzisi mutauro wokuGermany R.I. Paul.
1930-vha makore nokubatanidzwazve. Maererano Mutongo Bazi Education of Zimbabwe Zhytomyr akatanga vakava pedagogical mune 1934, uye kubva 1there Gunyana 1935 rakatumidzwa vadzidzisi 'akatanga pamwe mano maviri: ruyamuro fakaroti nemabhuku uye mutauro dhipatimendi dzakaitika dhipatimendi uye dzinongoitika fakaroti pamwe nenzvimbo uye zvakasikwa madhipatimendi. Institute akagadzira Vadzidzisi kuchikoro yechipiri majoring mune wokuUkraine mutauro uye Literature, History, bhayoroji, Chemistry uye Geography. The dzidzo mudzidzisi zvaikosha zvemagariro muna 1930-es. Institute simba strived kukwezva vana vashandi uye murimi mudiki mhuri. Nokuda kwechikonzero ichocho vaviri chikamu mumakoreji vakasikwa Malin uye Cherniahiv pamwe 240 vadzidzi.
General Sophistication uye mutauro kugona vaiva nematambudziko kupfuura kukurumidza panguva iyoyo. Kuti kuagadzirisa wokuUkraine mutauro makirasi chinozoiswa panguva nokukuyeuchidzai zvose.
Paiva vakachinja renhoroondo uye Geography zvirongwa uye zvirongwa maererano murau "About nokudzidza pamusoro History uye Geography panguva chikuru, kukwana yechipiri uye yechipiri zvikoro ' (1934).
Muna 1930-es zvaibvira kushandisa kuti akatanga kaviri - muchirimo uye mumatsutso. mu 1936 uwandu vadzidzi 1938 wakadzosa nokubatanidzwazve. Institute Wakazova hurumende pedagogical naye kwemakore mana kudzidza. It pamwe-gore maviri vadzidzisi 'sangano kusvikira 1952. Paiva nezvokurara nokuda kukwana yechipiri zvikoro vakagadzirira. akatanga Mumwe aiva History, Language uye Literature, Natural uye Geographical zvichitaurwawo. mu 1938 Zhytomyr pedagogical sangano akatuma 700 Vadzidzisi vane dzidzo yepamusorosoro kushanda kuzvikoro yacho. Paiva kushayiwa vadzidzisi 'mudonzvo kuzvikoro yacho. Kuwanda chikamu-nguva vadzidzi uye pakoreji vadzidzi rakanga richikura. mapoka (1 gore kana 6 mwedzi) vakagadzirira vamhan'ari kuti sangano. Maererano nemashoko ari Bazi Education of Zimbabwe Zhytomyr akatanga ndiyo yaiva nhamba chikamu-nguva vadzidzi.
85 lecturers aishanda vose kumayunivhesiti chete gore: mapurofesa maviri S.V. garaji, S.M. Smolinskyi, nhatu mutevedzeri mapurofesa maviri musarudzo sayenzi. Vamwe lecturers havana nhaka dhigirii upi. Pashure zvekare pamusoro West Ukraine pamwe Ukrainian Soviet Socialist Republic in1939 Institute lecturers vakatumirwa kunoshanda Bessarabia (kwaiva kushaya vadzidzisi 'mudonzvo munzvimbo): V. Dobrianskyi, O.M. Popadenko, P.I. Chernjavskyi, muzvinafundo S.M. Smolinskyi uyo rinotungamirirwa weDhipatimendi Pedagogy muLviv akatanga. Akagadzwa kuva musoro sangano pashure pehondo.
Uwandu vadzidzi uye kudzidza yakawedzera mumakore yakatangira hondo. 1170 vadzidzi kudzidza nezuva iri 1940/41: mu pedagogical sangano - 490; mune vadzidzisi '- 680; panguva chikamu-nguva hwaro - 2300. Musumo ari kudzidza pamusoro yokubhadhara hwaro (Mutemo Council Vanhu vaJehovha Commissars of Ukrainian SSR) ungaderedza uwandu vadzidzi (428 vadzidzi aitumirwa pasi). munguva 22 Makore Zhytomyr akatanga kugadzirira 5.5 unyanzvi vadzidzisi zvuru.
Muna 1930-VHA akatanga tsvimbo uye vadzidzi zvabatanidzwa basa rokudzidzisa pamwe kubatanidzwa mumagakava enyika upenyu guta. mu 1930 "Literacy Committee" rakarongwa paInstitute. Pakanga paine 345 nhengo, kazhinji vadzidzi.
Institute tsvimbo aitoita basa chesayenzi; vadzidzi vaiitawo zvakare. 17 Mavhoriyamu mabasa yesayenzi zvakatobudiswa 1935-1940.
Institute Misangano yesayenzi vakava tsika. Vadzidzi vakatora basa zvesayenzi. mu 1930 mumadhipatimendi ose Physics uye Mathematics, jioroji, kemesitiri, Political Economics, History, mafungiro, Ukrainian mutauro uye mabhuku akasika madenderedzwa apo vadzidzi vaiita basa zvesayenzi.
Tya political ezvinhu, njodzi emauto kunetsana yaikurudzira dzokutsigira uto dzidzo. Military nokuranga dzakaisirwa kupinda zvirongwa zvedzidzo.
mu 1934 muchiuto dhipatimendi uye neboka vakasikwa. Madenderedzwa dzakaumbwa - kupfura, giraidha vezvikepe, midhudhudhu, uye rubatsiro wokutanga zvokurapa. The lecturers uye vadzidzi vakadzidza kupfura, kushandisa svikiro machinegun uye chiedza muchina-pfuti. Mumakore yakatangira hondo basa kwakawedzera ikoko.
In November 1940 rechiuto boka, rinoumbwa 254people, rakarongwa kubva reservists. From February 1941 zuva kudzivirira wakatangwa (zvakatora 12 pamwedzi). Reservists akaumba 13 Mapoka kudzidza nokuranga zvechiuto: redhiyo dzaishandisa, midhudhudhu, machinegun, parachutist, kuzvidzivirira, zvokurapa kurongeka. The lecturers akaumba kudzivirira boka.
Pfungwa rwakabhadharwa kuna tsika uye mutambo mabasa zvakare. 155 vadzidzi vaiitawo kwaya, mitambo, mhepo uye kutamba madenderedzwa. Morozova, ane Actress yekwataigara yemitambo, rinotungamirirwa yemitambo denderedzwa. Vadzidzi yakarongwa nemagariro zviitiko nokuda vomumusha pamusoro Barishivka uye Stanishivka, masoja.
Five mutambo netsvimbo raishanda paInstitute: jimunasitikisi, kusimudza simbi, mitambo, nevolleyball uye nhabvu. 120 vadzidzi vaiitawo ikoko.
Zvokunyama nehwaro Institute akawedzera gore negore. Institute yaiva chinogumbura muguta rinonzi guta mudzidzi. It Kunoumbwa huru uye vaviri chishongedzo kudzidza zvivako vane Kirasi dzimba, mumarabhoritari, muzvidzidzo, Dzimba Dzemagungano uye mutambo horo, miziyamu, raibhurari vanopfuura 150 zviuru mabhuku. A mitambo pasi kwakaitwa paInstitute, mana paburiro dhomitari yakavakwa (1932) uye dzimba shanu nokuda lecturers. A botanical mumunda pamwe nemamwe miti vakakomba sangano.
The War akaparadza urongwa okusika uye pfungwa vadzidzisi uye vadzidzi.
Kwemakore akawanda (1941-1959)
muzhizha 1941 Institute akanga kupedza nguva dzose dzingaparwe gore. Asi Hondo yakatanga zvakanaka kuumbwa kumhanya upenyu yepakutanga. kwachena, Chikumi 22, kutanga mabhomba yakawira Zhytomyr uyewo kune mamwe maguta munyika dzakawanda.
Nomusi musangano vakatora nzvimbo panguva Institute. Vairatidzira mhosva nechisimba Nazism uye akaita mhiko kuti ape simba ravo uye kunyange anorarama nokuda Motherland. Yakakura nhamba kutenda kubva mapurofesa uye vadzidzi kuvatuma kumunda mauto vakatanga kuuya munyika. Mazana ari Institute educatees wevashumiri Dzvuku Army uye Fleet mumazuva okutanga chaizvo, dzakasaina nokuda vomunyika-mu-maoko; amburenzi uye mopping-up mapoka dzakaumbwa kubva mumuviri yavo.
Last mamiriro bvunzo zvakapfuudzirwa pasi watsemuka mhandu mabhomba. Uye kudzidza pamwe Mudzidzisi wacho zvitupa haana kuita nzira yavo mumakirasi asi akamira kuti maoko uye sallied zvakaitika kudzwa uye chakaoma bvunzo, ari kuvimbika kunyika imwe. Vazhinji vavo vakabatana mopping-up yokuzviparadzanisa izvo vakaziva uye akakurudzira pasi nhume muvengi uye vapanduki. O.O.Pavlovskyi, muzvinafundo, dzechikwata mutungamiri, aitarisira. Staff kumuzinda yokuzviparadzanisa yaiva muhositeri (zvino kuyunivhesiti wacho Hostel #1).
YeYunivhesiti Chivako nokukurumidza refurnished kupinda uto chipatara pamwe kudzidza sezvo orderlies.
Chikunguru, 5, vakawanda vasafara kutokonora pamusoro Zhytomyr akatanga. Vadzidzi vazhinji pamwe vagari veguta akaita nzira yavo netsoka nechokumabvazuva kutiza yechiFascist muuranda uye ipapo vakabatana munda mauto. Uto chipatara yakatumirwa Serial. I.V.Perchuk, muzvinafundo, mukuru wezvokurapa basa, aishanda muchipatara pasi kwazvo hwaiitwa kubvisa. Vokupedzisira kubuda Zhytomyr vaiva O.K.Kasymenko, muzvinafundo, akazozivikanwa musayendisiti-dzakaitika rweUkraine, vakuru Psalms Institute of nhoroondo USSR, B.D.Surkis uye S.L.Blyzniuk.
Panguva Great Patriotic War munhu aigona kusangana mapurofesa, vadzidzi, vamwe uye vadzidzi Pedagogical Institute panguva mitsetse, vari guerilla regiments, conspiracies uye mapoka pevhu mhiri pfupi Occupational nharaunda.
O.P.Boiarko, Mutevedzeri-Rector of Institute, akatungamirira Chernivtsi nechivando remunharaunda komiti bato, Y.O.Kovmir, wechipiri Vice-Rector, aiva mumiririri weimwe guerilla murayiro, apedza H.P.Mishchenko - okupandukira kuzopindazve mutungamiri simba, Gogita Plotnyts'kyi - Zhytomyr nharaunda youth rangano nhengo.
Chokwadi chokuti yechitatu makore rorusununguko History oga akamuka 68 mirayiro uye kupfuura 150 Medals uto anotaura mabasa makuru vadzidzi Pedagogical Institute munguva yeHondo. Kutsungirira uye ushingi anogona uyewo nomuenzaniso mumwe revarwi nhoroondo mudzidzi tsamba chikoro, commutation mumiririri Zhytomyr nechivando remunharaunda bato komiti Maria Tyshkevych. The musikana pamwe nehanzvadzi ndokugadzira magwaro aro, uye zvikamu counterfeited nounyanzvi yechiFascist vakuru 'nokudaro kwakaponesa vazhinji vechidiki vanobva rokumanikidzirwa muNazi Germany. Iye akava akabatwa yechiFascist kurwadziswa makamuri asi hapana kurwadziswa vakamumisa buritsa pachivande. Maria vakasangana rufu kwake sezvo mwoyo-wose Patriot. Atova akavigwa pamubhedha nokukudzwa Bohynia.
Mazana vadzidzi, hwakawanda mapurofesa neshamwari ari Institute akafa akaita magamba nokukudzwa uye rusununguko Motherland kwavo. A.V.Pavlovskyi, Rector of Institute, O.P.Boiarko, V.P.Vynohradov, Vice-rectors, uye H.P.Yemsenko, S.T.Parkhomchuk, wechikoro ari rorusununguko Workers, mapurofesa B.D.Surkis, V.D.Dobryvechir nevamwe vakafa. Mhuri Institute anoramba sacredly aikosheswa kurangarirwa kwavo. Chiyeuchidzo chiratidzo vachikudza mapurofesa, vadzidzi neshamwari vakawira pamberi muvengi nokuda womunyika nyika 1941-1945 rakavambwa pedyo huru chivakwa.
Night January, 1, 1944 guta akasunungurwa kubva vakundi Nazi. M.S.Bovsunivskyi (akazotevera nezvekuparara purofesa weDhipatimendi History uye Political Economy), P.K.Serbin (purofesa the World History Department), O.O.Boiko (neshamwari purofesa Literature Ukrainian Department), I.T.Yarosh (mukuru purofesa weDhipatimendi Pedagogy) vaiva pakati releasers ayo.
Mushure kusunungurwa Zhytomyr akanga akaipa chaizvo. Kembasi zvivako Institute pamwe makabhati ayo, mumarabhoritari, raibhurari, mapurofesa 'dzimba, uye hostel zvakaparadzwa. Asi kubva kuhurumende rweUkraine uye zviremera zvomunzvimbo rokutanga chaizvo akatora matanho kudzorera sangano dzakanga rokudzidzisa. Kare muzhizha 1944, mapurofesa neshamwari veawa; Nokubvuma vadzidzi vakauya chiito.
Gunyana, 1, 1944, Institute akazarura mutsva dzingaparwe gore, wokutanga pashure pokusunungurwa. It Kunoumbwa 9 madhipatimendi pamwe 31 mapurofesa. zvichitaurwawo Two zvakatangwa. Ndivo rorusununguko History uye Mutauro-Literature weVadzidzisi Vedare kusanganisira wokuUkraine uye Russian pamwe Literature Office. Muchisimbiswa vemumapato Pedagogical Institute kudzidzirwa-chikoro akashanda pamwe chete zvichitaurwawo pasi unoparadzanisa chirongwa. V.V.Chupryna akagadzwa sezvo Rector of Institute, Y.A.Kovmir uye I.I.Shaniuk - sezvo Vice-rectors. Asiwo mapurofesa itsva akasvika kuna Institute. Ndivo M.I.Petrovskyi, Shamwaridzanai Purofesa, Papera Musoro weDhipatimendi Marxism-Leninism, D.A.Kolomiiets, Musoro weDhipatimendi Ukrainian Literature, O.M.Semenova, Musoro weDhipatimendi Languages ​​Foreign, M.M.Lapshyn, Musoro Department of Education Military, mapurofesa S.I.Losiev, M.P.Bershii, T.M.Rybakov, N.M.Baryshpol 'uye nevamwe.
Iri raiva gore kuberekwa Institute rechipiri. Pakutanga sangano dzakanga rokudzidzisa pahumire mune rimwe zimba okurima pakoreji, ipapo - vari kuvaka Zhytomyr School #20. Staff zvaisanganisira mumwe purofesa mana shamwaridzana mapurofesa, vamwe havana nhaka kwomudzidzi madhigirii uye mazita. Pakanga paine 168 Vadzidzi vakapinda yakazara dzidzo uye 545 - Tsamba kudzidza.
The Institute akamhanya mumamiriro ezvinhu akaoma mune mangwanani chiteshi-yehondo. Pasina chiedza uye kudziyisa, imomo ehurukuro dzimba pamwe arovererwa-up mahwindo hurukuro, Tutorials, zvichemo urongwa akatora nzvimbo, Mishumo nesayenzi vakarwirwa. Vadzidzi vakateerera hurukuro uye akaita manotsi agere pamusoro yevhu pauriri. Paiva kushaya 16 mapurofesa, midziyo nokudzidziswa, chidzidzo-dzimba, uye dzimba vashandi, hostels nokuti vadzidzi. Mapurofesa uye vadzidzi vakaita matafura uye desks, magonhi nemahwindo zvose vega. Tashanda chaiitwa mudonzvo kudzorera raibhurari inotungamirirwa N.V.Kozlovska.
Pashure anokunda kuguma Great Patriotic War nyika ruzivo chaanenge achimhanyira mukudzidzisa vashandi. Izvi kuisa mabasa itsva yepamusorosoro masangano yedzidzo pedagogical kugadzirisa. Maererano Y.Y.Fialko, itsva mukuru nhau kuna Ministry of Education rweUkraine (1945), 453 Vadzidzi vakapinda dzidzo yakazara kusanganisira 46 vakaremara vakamborwa. Sokunge makuru kubudirira ikoko akaudzwa akaratidza kuti mahwindo vose nechekare paned uye kune kaviri mapuranga Zvechokwadi; vadzidzi ndasvitsa machira zvazvo pakanga pasina nezvifukidzo. By nekungwara kwavo, mapurofesa uye vadzidzi reconditioned zvedzidzo chivakwa, zvakachengeterwa huni chando, akaunganidza kukohwa mune chikamu-nguva kurima, uye akatora mugove okuchenesa uye foresitiri muguta.
mu 1946, Y.O.Kovmir akagadzwa sezvo vakuru Institute, P.T.Markushevskyi - sezvo Deputy Director pazvidzidzo nokutsvakurudza basa, S.T.Radchuk-Pavlenko akaiswa sezvo Director of Philological weVadzidzisi Vedare, K.O.Kyseliov - sezvo Director of rorusununguko History. mu 1947, weDhipatimendi Russian Language akanga inotungamirirwa M.B.Khramoi, weDhipatimendi Pedagogic - ne N.I.Mykhailova, weDhipatimendi Modern History - ne L.A.Kovalenko, Anoda kubhabhatidzwa sayenzi munhoroondo, uye weDhipatimendi Russian uye World History - ne S.T. Radchuk-Pavlenko. zvishoma nezvishoma, mhenyu, kushanda uye kudzidza Pakoreji Institute akavandudzika.
mu 1948, weVadzidzisi Vedare wemasvomhu uye Physics kusanganisira Department of Physics uye Department of Mathematics akatangazve basa rayo pashure-gore 16 chidzivaidzo. V.M.Kostarchuk aiva Principal yaro yokutanga. mu 1949, simba rorusununguko Mitauro Foreign rakatanga basa rayo uye nokukurumidza vakanyarara kuva yakazvimirira sangano.
mu 1950, contingent yevadzidzi Vakapfuura 2 vanhu zviuru. Pakanga paine 770 aienda zuva-kusuduruka dzidzo uye 1262 - Tsamba kudzidza. Pedagogue kirasi yakawedzera akagamuchirawo. sangano epamusoro rokudzidzisa akapa nyika 472 pava-; 60% pamusoro pavo akasvika uvape kumadokero rutivi rweUkraine.
Educational uye kwesayenzi-nzira basa kwakavandudzika. mu 1958, IXfung vhorumu (wokutanga pashure hondo) pamusoro Scientific Notes (physico-akarongeka mutsetse) wakabudiswa. L.A.Kovalenko, sanyina muzvinafundo, V.M.Prylypko, V.I.Pivtoradnia uye B.I.Khatset sevakanga kubatsira panguva iyoyo. urongwa hwavo ukabatwa pfungwa yakafara yesayenzi voruzhinji. Mapurofesa akaronga anoverengeka yakarongeka rwezuva-book vadzidzi. Pakati vamwe zvinotevera, O.Korniichuk kwakaita Drama Learning muna Secondary School kubudikidza V.I.Pivtoradnia, akapfupikiswa pamwechete nenzira hurukuro Old kwechiSlavonic Language kubudikidza T.V.Baimut, sanyina muzvinafundo. The Department of Ukrainian Language pamwe vakwegura kwapera pakundopambara kudzidza Zhytomyr nharaunda tumitauro.
Nhoroondo Polissia kudzidza akava zvaone- mapurofesa 'kuongorora kwesayenzi. Scientific Notes (1957) chakatsaurwa kuti ichi uye Kunoumbwa pakutsvakurudza nyaya kwematunhu nyaya.
Munguva yepashure pehondo, kusvika pa 1957 sanganisira, Institute rakapa 7 zvemaBhaibheri Scientific Notes kuratidza kutsvakurudzawo pedagogical chikwata yakawedzera. mu 1955-1957, 109 tsvakurudza uye dzesayenzi-nzira mapepa akanga rakabudiswa mapurofesa.
Yose yepashure pehondo simba rorusununguko History zvaisanganisira akawanda Aimbova servicemen uye guerilla nhengo yakahwina kuchikosheswa zvedzidzo mberi uye muzvimwe. mu 1948-1950, pakanga paine 39 vadzidzi zvakaisvonaka wakati kudzidza Institute pamwe anokudza. Mune nguva 14 Makore pashure hondo, 1.6 vadzidzi zviuru akagamuchira dzidzo kure-basa kwemaawa.
mu 1956, simba rorusununguko History hwakatamisirwa Lutsk Pedagogical Institute.
Majaya nemhandara vakatora kushingaira chikamu munzanga upenyu uye neveimba basa. Rinenge gore negore vakabatsira mumapurazi kuunganidza goho, akaenda newground, vaishandira zvevana nhandare uye kwemauto dzimba, ichadzorerwa nechepakati Barton of Institute, kembasi zvivako, raibhurari uye kandini.
Students 'magariro akavandudzika. mu 1954, hostel kutanga 250 nzvimbo yakanga yakagadzirira govera vadzidzi. Book muunganidzwa muraibhurari Institute refilled. Tsika rutsigiro mabasa dzakabudirira.
zvishoma nezvishoma, huru pakuvaka Institute vakasimuka kubva rokuparadzwa. mu 1959 oga, mapurofesa uye vadzidzi vakashanda panze 48 zviuru murume-mazuva. Chii chimwe, turnpike migwagwa, Zvinotivaraidza uye Entertainment Park uye mitambo munda dzakarongwa kuedza nevadzidzisi ramangwana.
Mudonzvo Institute wakashamira zvesayenzi uye anokurudzira nevanhu nyanzvi masangano munyika dzakasiyana kwirirei rokudzidzisa. Masayendisiti kubva Moscow, Leningrad, Kyiv, uye Odesa zvokuita kuti vatinodzidza navo. Methodic Kuchinjana Scientific Notes kwakavandudzika pamwe matanda Pedagogical Institutes muna Vinnytsia, Izmail, Odesa, Mykolaiv, Kamianets-Podilskyi, chernihiv. Dzakasarudzwa pamusoro Zhytomyr State Pedagogical Institute akashanyira yepamusoro establishments dzidzo Minsk, Moscow, Leningrad, Homel, Volhohrad.
O.P.Yura-Yuraskyi, Honoured Artist rweUkraine, akazviratidza muna Institute mabasa mabhuku recitals ake. Nevaimuteerera vane vanyori vakadai M.Rylskyi, A.Malyshko, V.Kucher, V.Sosiura, L.Pervomaiskyi, M.Nahnybida, V.Kozachenko, S.Oliinyk, H.Boiko, P.Sieverov akatora nzvimbo pano uyewo.
Zhytomyr State Pedagogical Institute akatanga 60 ayo wacho pasi zvakatipoteredza wokutanga anoedza democratize munzanga upenyu munyika. dare rinodzora wayo okumusoro akanga ari Board of Institute, asi kubva 1972 chakava Yedzidzo Board kusanganisira Rector, Vice-Rector, deans, pati uye Koshanda vanyori, vatungamiriri mapurofesa 'uye vadzidzi' wezvokutengeserana mubatanidzwa makomiti, vakuru madhipatimendi, mukuru mapurofesa, uye vadzidzi.
From January, 1958, I.F.Osliak, Anoda kubhabhatidzwa Philological Sciences, sanyina muzvinafundo, Aishanda sezvo Rector of Institute; kubva December, 1973, P.S.Hornostai, Anoda kubhabhatidzwa Pedagogical Sciences, sanyina muzvinafundo, akanga Rector of Institute; kubva October, 1986, zvakanzi vanotungamirirawo I.M. Kucheruk, muzvinafundo.
Secondary kuchinja chikoro kuti zvidzidzo itsva 60 raMwari, okusuma hake dzidzo paruzhinji yechipiri-pamwero kwakawedzera pedagogic chinangwa nokure. The chikuru mutoro nokubatanidzwazve ichi dzakawira Pro-rectors mune dzidzo basa M.P.Zhurbas, L.M.Kurkcha, uye M.M.Osadchyi vakanga vakatakura zvinhu mabasa kubva 1977.
Pakutanga 60 wacho, Institute dzaikodzera pedagogical vashandi pamusoro mano vaviri vane madhigirii unyanzvi gumi nokuda dzidzo renguva yakazara, uye muna matatu tsamba madhipatimendi.
The rorusununguko Philology vakabayira mikana iri kuwana dhigirii: Ukrainian Language uye Literature, Russian Language uye Literature, Russian Language uye Literature uye Chirungu Language, Russian Language uye Literature uye Language German; Russian Language uye Literature uye Pedagogy vadzidzi vaibva Uzbekistan (munguva 1959-1973); Russian Language uye Literature ari chikoro nemazvo kuti vadzidzi vaibva Kazakhstan (mu 1971-1993).
The rorusununguko Physics uye Mathematics akadzidzisa nezvokurara mu: Physics uye Mathematics, Masvomhu uye Physics, Physics uye Chirungu Language, Physics uye zvinokosha nokuranga, Masvomhu uye Technical Drawing.
Matsamba dhipatimendi vadzidzisi vanokwanisa pakati wokuUkraine Language uye Literature, Russian Language uye Literature, masvomhu. pamusoro 1944-1971, wedhipatimendi akanga aionekwa somunhu fakaroti pasi dhipatimendi redzidzo yakazara. Tichifunga kuti 60 wacho, 42 muzana vadzidzisi Zhytomyr nharaunda, ndokuzo 36 muzana pavo 70, havana akamuka dzidzo yepamusorosoro, ruzhinji pamusoro okuverengwa of Institute akanga extramural vadzidzi. Rwakakwana kuti unyanzvi-ataurwa pamusoro apa vakanga mikana kuwana dhigirii Chirungu Language uye Language French (1963-1972), vari Biology (kubva 1974), uye Pedagogy uye Primary Education Nzira (kubva 1978).
mu 1962-1968, General Scientific weVadzidzisi Vedare kusanganisira Department of Humanities uye Mathematics aishandira extramural vadzidzi. Vadzidzi akadzidza kuwana dhigirii History, Library Science, Legal Science, Ukrainian Language uye Literature, Russian Language uye Literature, Chirungu Language, Language French, masvomhu, Physics. Zvadaro, vadzidzi akaenda padenga mamwe kudzidza pakuwana unyanzvi kuti chisarudzo dzakakwirira masangano dzidzo kuUkraine pasi tsamba madhipatimendi.
mu 1963, simba rorusununguko Mitauro Foreign somunhu yoga fakaroti akanga akabva pasi aegis pamusoro rorusununguko Philology. The fakaroti dzinokwanisa nezvokurara muna Chirungu uye German Mitauro, uye kusvikira 1972 - Vari Language French. Vadzidzi kubva Uzbekistan aigona kuwana dhigirii Chirungu Language uyewo.
The 70 Zvakazoitika kuva makore chinozikamwa kuwedzera uye diversification of Institute. Mushure Berdychiv Pedagogical Institute kwakaregwa weVadzidzisi Vedare of Natural Sciences hwakatamisirwa Zhytomyr (1972). WeVadzidzisi Vedare akakodzera vadzidzisi Biology uye Chemistry. mu 1976, simba rorusununguko wechishanu yakanga akabva. Iri raiva rorusununguko Primary Education venguva yakazara dzidzo uye matsamba kudzidza. Kare pagore, weVadzidzisi Vedare aronga nechimwe zvaanonyatsogona - Music.
Kuwanda madhipatimendi, vadzidzi, kudzidzisa vashandi, neshamwari kaviri. Naizvozvo zvakanga zvakakodzera kuti redeploy Tutorials kupinda majana maviri.
mu 1979, Institute akahwina wechipiri zvakanakisisa pakati pedagogical Kudya yepamwoyo vadzidzi 'basa, upenyu uye nguva yokufaranuka sangano. Hostel #3 akahwina mubayiro wokutanga. M.O.Lukin aiva superintendent ari Hostel panguva. The Institute waikudzwa nokuda kuita dzaro zvitupa pamusoro Republican Trade Union Committees uye Ministry of Education rweUkraine.
Constant kunyoresa kukura, origination itsva zvichitaurwawo uye unyanzvi hunodiwa zvikuru panhau pamusoro upgrading zvivako.
mu 1962, huru chivakwa pazvivako akanga reconstructed zvachose. mu 1979, ane kupfura maberere uye rwekushanda nesimbi uye kubudiswa okudhindira dzakavakwa. mu 1987, itsva kembasi of rorusununguko Mitauro Foreign akaiswa komisheni. munguva 1972-1981 pamusoro imwe nharaunda 15 hectares, nokudzidziswa-rabhoritari dzimba uye kurovedzwa-duku Holdings nokuda agrobiological chiteshi vakavakwa. mu 1988, ari overhaul pamusoro pazvivako chivakwa rorusununguko Natural Science aitarisira. mu 1990, itsva masere-storey kudzidzisa-rabhoritari chivako rakadzikwa kusanganisira zvitatu completions ayo akavakwa 1992. pamusoro 30 makore, nzvimbo yacho Institute akawedzera kakapetwa runa.
Vadzidzi akamuka dzidzo munyika 217 horo, kwayo 14 vaiva vanopinda huru. Ikoko zvakavakwa 25 chaiwo mumarabhoritari uye 59 zvidzidzo, kwayo zvikuru vavo vakanga vakapakata nokudzidziswa zvivako.
Vadzidzi vangashandisa hostels shanu (wakazaruka 1935, 1956, 1972, 1981, 1986); rwekutanga romukova kusanganisira Consulting uye kumonyanisa dzimba, mazino hofisi, uye shanu voga nemawadhi. Imomo hostels 2 vadzidzi chiuru 82 mhuri akararama.
In rokuita kukura inodiwa yechipiri zvikoro vadzidzisi kuwanda Yedzidzo dzidziso mudonzvo vakawedzera. mu 1960, 73 mapurofesa vaishandira 12 madhipatimendi, kwayo 27 mapurofesa vapiwe kwomudzidzi madhigirii musarudzo of Sciences uye zvedzidzo mazita okuremekedza shamwari mapurofesa. mu 1990, 22 madhipatimendi akaverenga 289 mapurofesa kusanganisira 10 Doctors, mapurofesa, 114 Musarudzo of Sciences, nevanotonga mapurofesa pakati pavo.
Kwemakore 60 wacho, vanenge chiuru mapepa nesayenzi mune 1.2 akadhindwa machira zviuru yakasindimara vhoriyamu pamwe 17 zvemaBhaibheri Scientific Notes yakapiwa nezvinoedza kuitwa nyanzvi Institute. 84 monographs, 556 rugwaro-mabhuku uye nzira nhungamiro, 11 vateresi nyaya uye abstracts, 108 mabhurocha, kupfuurisa 2 zviuru nyaya dzakabudiswa mukati anotevera 20 makore. munguva 30 makore, mupiro Institute kuti mberi pfungwa yesayenzi zvasvika 3,750 mapepa nesayenzi.
kakawanda, Institute aiva nzvimbo nokuda Republican, interuniversity, uye zvenharaunda Conferences. Thuswise zvinotevera Misangano Republican dzesayenzi sezvo pachiitiko 70fung uye 75fung Kuberekwa M.T.Rylskyi, 110fung uye 115fung Kuberekwa I.Franko, 150fung Kuberekwa T.H.Shevchenko, 100fung Kuberekwa M.M.Kotsiubynskyi, 170fung tichayeuka H.S.Skovoroda afa, 100fung Kuberekwa Lesia Ukrainka, uye mitauro uye dzidziso mabhuku nyaya yakaitika pano.
Kupa rubatsiro kuchikoro akava mumwe vaitungamirira Institute mitsetse. kubva 1970, zvose mumaruwa munzvimbo dzakanga hunopiwa mumadhipatimendi akasiyana. Muma1970, pamwedzi mapoka ndichibvunza mudzidzisi kudzidzisazve ari unyanzvi sere vakatanga kushanda. pamusoro 20 makore, 14.5 zviuru vadzidzisi nharaunda chakapedzwa kudzidzisazve makosi. mu 1984, Zvinokosha Computer Science uye Computer Engineering makosi akavhurwa panguva rorusununguko Physics uye Mathematics. Gore negore kupfuura 400 vadzidzisi Mathematics vakadzidza zvinhu mapurogiramu uye yekombiyuta tsika. Panguva Republican Choushumiri Institute yakahwina wechipiri zvakanakisisa Shanduro anobatsira rubatsiro zvikoro (1975). munguva 1970-1990 oga, 170 rugwaro-mabhuku uye kupfuura 300 nzira Mirayiridzo yakapiwa zvikoro.
Kutanga hake ruzhinji zvesekondari-pamwero muna 60 vakandopisa basa kupa zvikoro, nokudzidziswa mumakoreji, Zvikoro yokuzvidira uye michina zvikoro yokuzvidira nedzidziso vashandi. Sezvo ari 1960, Kunyorwa yevadzidzi kwakanga 2.4 vanhu zviuru kusanganisira 760 yakazara vadzidzi uye 1.7 zviuru extramural vadzidzi; mu 1970, Wakasvika 1.6 uye 1.5 zviuru vadzidzi akagamuchirawo. Mune mamwe makore gumi, okuverengwa yakanga 2.4 zviuru yakazara vadzidzi uye 1.1 zviuru extramural vadzidzi. Gunyana, 1, 1990, okuverengwa pakati vadzidzi Institute rakanga 2.8 zviuru yakazara dzidzo vadzidzi uye 1.6 zviuru extramural vadzidzi. nhamba huru vakanga medalists, vechidiki vaigara kumaruwa. Zvikamu zviviri muzvitatu yakazara rubvumo yakaitwa kubudikidza musha chikoro leavers, kubva 1972. Chete nhengo yakakurumbira dzidzo, asunungurwa kubva Armed Forces, uye kudzidza kubva kumudzidzisi kudzidzisa mumakoreji vakanga vanyoresa tsamba kudzidza. mu 1990, vechidiki avo ndanyoresa nokuda dzidzo yakazara totaled 50 muzana have chipfuro mutambo. Ndivo vadzidzi rimwe mukugadzirira dhipatimendi uye Zhytomyr Mudzidzisi Training College.
Professional unyanzvi vakapedza kudzidza akaumbwa nokuda nyanzvi pakudzidzisa tsika sangano. Zvinotevera mhando kudzidzisa tsika dzakanga chakaunzwa vadzidzi kudzidzisa maitiro pamusoro basa chesayenzi-rokudzidzisa: socio-political tsika, pamusoro-zvedzidzo dzidziso tsika nokuda vadzidzi 1there uye 2D makosi, kudzidzisa tsika Piyona mumisasa, kudzidzira basa nedzidziso squads, Occupational tsika nokuti vadzidzi 4fung kosi vari kunze kuchikoro edzidzo basa-basa, kudzidzisa tsika muzvikoro pamusoro Zhytomyr uye nharaunda.
kubva 1977, tsika nokuti vanodzidza 1there-5fung Chokwadi pasi Zvikoro akapa mukana kutsausa kudzidzisa tsika kupinda kuramba munhu. Vadzidzi rorusununguko Initial Mudzidzisi Training atanga tsika dzavo pamusoro kwemakore matatu kutungamirira kirasi iyoyo. Vasati tsika chikoro, vadzidzi ataurwa fakaroti uye rorusununguko Natural Sciences vakatenda munda tsika nenguva agrobiological yemapurisa of Institute. Great nzeve pamusoro chikamu ichi basa rakanga kutsigira. gore negore, 60-62 muzana yevadzidzi akapfuura kudzidzisa tsika pamwe chakanakisisa chiratidzo, uye kuti 35 muzana vaidzidzira akamuka 'zvakanaka' chiratidzo.
Iongororwe nomunzvimbo emauto uye basa Mbiri, chipeto Concerts nherera, Migwagwa erudo kuti Denyshiv Orphan Asylum, akatakura pamusoro Memory unorinda, Murwi wacho Tsamba Campaign, utungamiri ouduku, mathematic, chisimba, uye astronomic zvikoro, pamwechete mabhuku Studio vana, zvokurapa zvirimwa muunganidzwa, overhaul pamusoro Partisan Mukurumbira horo mumusha Kopyshchi uye zvakadai - totaled vadzidzi izvi zvose 'anobatsira mabasa.
Panguva wechitatu kushanda kwetemu, 282 kuvaka brigades vaishanda pane zvitsva pasi Krym, Mykolaiv, Kherson, Kyiv, Tiumen, Orlov, Bandar uye Mahdn. ivo chinozoiswa 21 miriyoni rubles (kuyera mu mutengo 1990) pamusoro guru upfumi, reconstructed 51 zvikoro, kusanganisira 5 akavaka, akavaka 128 nhandare, 78 mumakirasi.
Amateur mapoka tarenda akanga pazvimwe vechidiki vadzidzi kurovedza. Yateriv pevairwara rwiyo kwaya rinotungamirirwa M.O.Nykorchuk, uye Suzir'ia kutamba kambani rinotungamirirwa V.O.Svitelskyi zvakazivikanwa kuzivikanwa mhiri nharaunda uye kunze uye akamuka musoro vanhu (1987). Kalyna boka acho mumhanzi rinotungamirirwa P.I.Antonevskyi uye Elehia Vocal boka rinotungamirirwa V.V.Sychevska paakasvika rokuremekedza iri uyewo.
A multipronged kusvika pamusoro inodzidzisa uye tsvakurudzo basa ungwaru-orientated nemano nezvokurara yemberi yaiva rubatso ose zvinogadzirisa kwayo mudonzvo Institute inowanikwa makore 1960-1980. New quantitative uye Qualitative kuchinja, rworwendo itsva uye vanga vaneta vaifanira kuuya Kuvira. yapfuura 70 makore basa vaiva hwaro implementations avo.
makore rokutanga rusununguko rweUkraine (1991-2001)
Independence rweUkraine 1991 zvaida kuchinja utariri, STRUCTURAL nokubatanidzwazve, kuvandudzika of zvirongwa zvedzidzo, uye pokugadzwa madhipatimendi itsva. The chikuru basa muna 1990-es kwaiva kugovera zvakakodzera pamwero dzidzo iyo aigona kusangana ehurumende unhu uye mitemo.
kuti 1999 vadzidzi akagamuchira "mazvikokota" dhigirii pahwaro dzidzo zvizere yechipiri. Kubva ku 1 waSeptember 1999 kuyunivhesiti (ane chinzvimbo chakabvumwa) takagadzirira vanatenzi pamusoro kudzidza-for-muripo fomu, kubva 1of September 2000 - On ehurumende bhajeti muchimiro dzidzo pachishandiswa "nyanzvi" dhigirii. The itsva kudzidza zvirongwa zvirongwa yakagadzirwa.
Panguva pakutanga 1990-es Institute Kunoumbwa 5 zvichitaurwawo, munhu mukugadzirira dhipatimendi uye 22 madhipatimendi apo 289 lecturers zvakashanda. Pakati pavo paiva 10 vanachiremba, mapurofesa, 114 musarudzo sayenzi, mubatsiri mapurofesa, vadzidzisi zvitatu vakakodzera pamusoro dzidzo uye tsika Ukraine. It Kunoumbwa 42.9 % pemudonzvo zvose.
307 lecturers aishanda payunivhesiti 2001, 176 vavo vakanga madhigirii yesayenzi; naro Kunoumbwa 57.3% kwomudonzvo. Pakati pavo nhengo National Academy of Science rweUkraine, Nhengo mbiri runoenzanirana National Academy of Science rweUkraine, enderana nhengo Agricultural Academy rweUkraine, 28 vanachiremba, mapurofesa, 148 musarudzo sayenzi, mubatsiri mapurofesa, 8 vashandi vakakodzera rweUkraine (dzidzo, yepamusoro chikoro, tsika uye kurovedza muviri), kupfuurisa 40 yakanakisisa lecturers dzidzo rweUkraine, vaduku nyanzvi - ngaabvumire yokuisira of Cabinet pakati Vashumiri muUkraine uye mari "Vidrodzhenia" ("Revival"). Kuwanda tsvimbo madhigirii akaramba achikura 14%.
Kuwanda madhipatimendi yakawedzera kubva 22 kuti 31 mu 1991 - 2001 makore, uye nhamba huru nyaya kubva 13 kuti 21. Paiva akasuma nyaya itsva zvikuru: Ukrainian mutauro uye mabhuku uye Country Kudzidza muUkraine, Ukrainian mutauro uye mabhuku uye Social Pedagogy, Ukrainian mutauro uye mabhuku uye History, History uye mutauro Ukrainian uye mabhuku, makirasi Primary chikoro uye Practical Psychology, Masvomhu uye Informatics, mutauro wokuGermany, uye Chirungu uye mabhuku, Ukrainian mutauro uye mabhuku uye Educational Materials Editing, Chemistry uye Biology nezvimwewo.
Mamiriro ezvinhu matsva zvaida methodological kuchinja. The implementation pamusoro michina mitsva uye kushingaira dzokudzidzisa raiva guru kukosha the1990-es. The anovhara-modular uye vegiredhi-Rating nehurongwa dzakanga dzatangwa, didactical uye basa mitambo aiiswa tsika.
Technologies pokudzidza tsvakurudzo kwacho, mushandirapamwe uye kuvakwa zvaishandiswa panguva inoshanda Pedagogy makirasi. Basa kuitwa Pedagogy dhipatimendi aiva nechimwe chive pedagogical Chinyorwa-bhuku rakabudiswa Institute of hurongwa pakutsvakurudza pamusoro reBazi Redzidzo rweUkraine 1995.
Computerization ari edzidzo kwacho kuri uchibata pamusoro. Physics uye Mathematics dhipatimendi vakasuma mararamiro kombiyuta kushandiswa iri kudzidza kwacho. The kosi akamhanyira Mabhokisi uye zvirongwa yakatanga panguva Mathematics uye Informatics uye Physics madhipatimendi. Zvirongwa zvakadaro vave zvikuru kushandiswa weDhipatimendi Psychology kuronga mupfungwa miedzo. Vadzidzi tenzi dhigirii uye miteva Vadzidzi vaiva mapoka tsvakurudzo kombiyuta basa. Computers inoshandiswa miedzo uye miedzo yakaoma.
panguva 1990 pakanga paine 104 makombiyuta, mu 2001 - 230, kunyanya kune 13 kombiyuta makirasi pamwe 203 kushanda nzvimbo. The michina unhu advance. The yunivhesiti tsvimbo uye vadzidzi vane Indaneti uye e-mail Serves. Nokukurumidza corporative kombiyuta pomumbure vachapedzwa. The dhipatimendi Database udzvanyiriri, kombiyuta zvakarukwa hofisi midziyo vatanga basa rayo.
The Chirungu mudzidzisi muzinda kuzvidzora dzidzo akasimudzira implementation yacho ano hwokugadzira vari mubishi Chirungu pakudzidza ari akatanga uye establishments kudzidzisa nharaunda. Zvakange akasikwa 1995. The pakati zvinosanganisira 5 mumarabhoritari: ano hwokugadzira muna Chirungu kudzidza, chekudzidza mutauro wokuGermany, mutauro Chirungu kudzidza, chimwe mukirasi kuti mutauro wokumwe kudzidza, ane Chirungu mukirasi. Students uye 120 vadzidzisi kubva kunzvimbo basa kazhinji nechepakati razova chinhu methodological rabhoritari. Zvinonzi akashongedzerwa nemabhuku ano zvechokwadi, mabhuku, maCD nemavhidhiyo-zvekushandisa. Seminars vari vatorwa mutauro kudzidza hwokugadzira zvinhu ano, Misangano kutora nzvimbo ikoko. The pakati collaborates pamwe British Council, neAmerican Center, International Center, Rugare Corps, uhu "Vidrodzhenja" ("Revival"), vatorwa kutsikisa dzimba. Zviri nhengo dzakawanda sangano TESOL. Muzinda muchirongwa sangano iri All-Ukrainian makwikwi mitauro nokuda yechipiri vadzidzi chikoro (1996) uye All-Ukrainian makwikwi yakanakisisa wokumwe mutauro mudzidzisi kwegore (1997).
The ano hwokugadzira vari kudzidza kwacho kunge akatsigira kukura kwebasa vadzidzi 'munhu, yaikurudzira researches dzavo; mugumisiro zvibereko. Vadzidzi dzakakundwa 40 mubayiro nzvimbo panguva All-Ukrainian nyaya makwikwi mu Mathematics, Informatics, bhayoroji, kemesitiri, Psychology, Practical Psychology, Chirungu, Pedagogy, Ukrainian mutauro uye mabhuku, mutauro wokuGermany, Social Pedagogy mu 1997-2001. Vakatora zvepamusoro panguva All-Ukrainian makwikwi pakati pakutsvakurudza mudzidzi muna Pedagogy uye Psychology mune 1998-2001; chete 2001 pakanga paine 12 mubayiro nzvimbo panguva All-Ukrainian nyaya makwikwi.
Panguva All-Union mudzidzi makwikwi Olexandr Sarana vakagoverana mubayiro wokutanga mudzidzi kubva Moscow Lomonosov University, uye Dmitro Stepanchikov vakagoverana mubayiro wokutanga mudzidzi kubva Novosibirsk University.
vadzidzi, Miteva vadzidzi lecturers mumhemberero makwikwi akasiyana kunodzidziswa uye kudzidza kwose. Mumakore okupedzisira makore vaiva kudzidzira muUK, USA, Jerimani, Ositiriya, France uye Poland.
Yunivhesiti anoitisa researches mupfungwa uye maitiro vadzidzi 'kudzidza uye dzidzo, uvandudze mudzidzisi kurovedza, nzira muchikoro yepamusorosoro, Nhoroondo nyika kudzidza, National kuziva zviri wokuUkraine mabhuku, Polesia tumitauro 'Mutauro, zvoutachiona hwaro wokuUkraine fauna of kudzivirira uye ayo kubereka, zvinetso zvemazuva tsvakurudzo Chirungu Mutauro, kweShanduro semiconductor zvinhu, mvura crystals, kutsvakurudza kwavo chaiko unhu nezvimwewo.
The dhigirii Vadzidzi vanogona mberi kwavo kudzidza payunivhesiti kana zvimwe wokuUkraine mumayunivhesiti uye kuwana kwavo miteva dhigirii. okutanga vadzidzi The dhigirii akatanga kudzidza payunivhesiti 1992. Nhasi kune 11 nyaya huru uye 35 vadzidzi wakanyoresa. The dhigirii Vadzidzi akadzivirira 23 zvichemo mumutauro wokuUkraine, Dzidziso mabhuku, bhayoroji, Pedagogy, weGermany mitauro; 13 mabasa vakagadzirirwa kudzivirira pakuvhiya. The lecturers akadzivirira 5 Miteva zvichemo uye 68 wapurofesa chinoshanda okupedzisira 10 makore.
Imwe magazini "Visnik pamusoro Zhytomyr pedagogical kuyunivhesiti" rave yakabudiswa 1998; chiri akatsiva "zvinyorwa Scientific", rakapepetwa muna 1920-es nokuda pedagogical Institute. Kupfuurisa 5.5 kwesayenzi uye methodological nyaya zviuru dzakabudiswa.
mu 1990 paiva kuedza kupa yechipiri uye yakakwirira zvikoro nemabhuku ano dzidzo uye methodological. 126 mabhuku uye mabhuku zvakatobudiswa okupedzisira 5 makore.
Zvirongwa dzidzo dzakachinjwa nokuda kuchinja mumagakava upenyu munyika; kwegadziriro dzinokosha makosi, ekudzidzisa uye Opsioneel makosi wakatangwa; kunosimudzira gadziriro nani basa hunobatsira. Nokuti nyaya imwe neimwe pane zvakagadzirwa nemiedzo kuongorora ruzivo pamwero yaro yepamusoro. Pane nemiedzo zvakaoma nokuda kosi kudzidza. The zvirongwa dzidzo yakagadzirwa kuti vaanotonga pasina zvirongwa nevakawanda dzidzo.
Kuvandudzika ari kudzidza kwacho akapa inobereka zvibereko. Avhareji mberi mukudzidza ndizvo 95-96%, unhu - 56-60. Migumisiro kazhinji akaratidza pachena zvaitika ari kunzwisisa miedzo dzenyaya siyana uye kunzwisisa zvinodiwa bvunzo.
9.9 vadzidzi zviuru kudzidza pamusoro yunivhesiti iri 1990-2001; 6 zviuru - pamusoro zuva nezuva uye 3.9 - Chikamu-nguva yokudzidza. 86-90 % vanenge vapedza kudzidza vanoendeswa kubasa.
Mujinga yunivhesiti redzidzo uye zvinhu yakura mumakore achangopfuura. A chivakwa nokuti Philology dhipatimendi uye chivako nokuda chikuru makirasi vadzidzisi vakaiswa kushanda mukati 1990; mumakore akatevera nzvimbo paminiti imwe mudzidzi akanga awanda kubva 4,5 mativi metres 1992 kuti 9,6 - vari 2001. Nokuti vadzidzi 'kudiwa varipo 5 dormitories (2000 nzvimbo), mumwe refectory uye canteens (390 nzvimbo), raibhurari pamwe 420 000 mavhoriyamu, kurima biostation. 89 mumarabhoritari uye mumakirasi anoshanda kuyunivhesiti, zvikuru sei 6 linguaphone mumakirasi, phonolaboratory uye 13 kombiyuta mumakirasi (203 nomumwe kubasa).
mu 2000 chivakwa mutambo kunzwisisa chakatangwa musi kubva bhajeti mari, yakapera muna 2003.
Maererano murau № 761 of Cabinet of Vashumiri Ukraine Zhytomyr akatanga akapiwa mamiriro yunivhesiti pedagogical.
The State rokuongorora revatungamiriri masangano kudzidzisa reBazi Redzidzo uye Science rweUkraine vakapfuudzira ane chipupuriro nyanzvi pakuongorora kuyunivhesiti. Maererano kwaizoitwa nenyanzvi kuongororwa yunivhesiti achigura chipupuriro, uye zvikurukuru mune zvikuru nyaya zuva nezuva uye chikamu-nguva yokudzidza ari IV pamwero - "Primary Study", "Mutauro Ukrainian uye mabhuku", "Mutauro wokuRussia uye mabhuku". "Mutauro Chirungu uye mabhuku", "Chemistry" uye III pamwero - "Musical pedagogy uye dzidzo", "Ethnology", "Psychology", "Informatics". The mukugadzirira dhipatimendi akasimuka kuburikidza chipupuriro uyewo.
kufarira, Kukwanisa kushanda uye simba rokusika kwomudonzvo wepayunivhesiti ndiye pasi kuti kubudirira vatsva chiuru chemakore chechitatu.
Pa 24 yaMarch, 2004 Zhytomyr pedagogical yunivhesiti akapiwa Chinzvimbo Zhytomyr Ivan Franko State University maererano murau № 172-р pamusoro Cabinet of Vashumiri muUkraine.
Unoda kurukura Zhytomyr State University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Zhytomyr State University iri Map
Photos: Zhytomyr State University pamutemo Facebook
Zhytomyr State University wongororo
Join kukurukura pamusoro Zhytomyr State University.
Yenyika yeEuropean University Kyiv